40 taona ny 12 desambra : hitarika Hetsika Nosy malagasy ny Otrikafo | NewsMada
40 taona ny 12 desambra : hitarika Hetsika Nosy malagasy ny Otrikafo
12 desambra 1979-12 desambra 2019. 40 taona ny fehinkevitry ny fivoriamben’ny Firenena mikambana (ONU) manambara ny maha an’i Madagasikara ireo Nosy malagasy manodidina.
Manoloana izany, miantso sy manainga ny Malagasy rehetra tsy ankanavaka ny Otrikafo mba ho tonga hiara-kientana sy hifanome hery aminy mandritra ny Hetsika Nosy malagasy, hatao ao amin’ny kianjan’Ambahijatovo, ny 12 desambra, araka ny fanambarany teny Andravoahangy Ambony, omaly.
Manomboka amin’ny 7 ora sy sasany maraina ny hetsika, hatramin’ny 1 ora tolakandro. Antsoiny amin’izany na ny avy amin’ny antoko politika inona io, na antokom-pinoana inona, na sokajin-taona toy inona, na mpampianatra, na mpanabe, na mpianatra, na mpiasa… “Fantatray ny halehiben’ny fitiavan-tanindrazana ao amintsika rehetra”, hoy ny Otrikafo. An’ny Malagasy ireo Nosy manodidina ireo. Tolom-panafaham-pirenena ity. Mila haseho fa Malagasy sarotiny amin’ny fiandrianampireneny ny Malagasy. Toherina ny fitohizan’ny fanjanahantany amin’ny endriny vaovao.
Ho fanamafisana ny fiandrianampirenena izany, ho fitsinjovana ny tombontsoa ambonin’ny firenena. Eo koa ny ho famaliana ny antso avo nataon’ny filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, ho amin’ny firaisankina masina, ho fankaherezana ireo solontenan’ny vahoaka malagasy mifampidinika amin’ireo solontenan’ny fitondram-panjakana frantsay mba hamerenana ireo Nosy ireo amin’i Madagasikara. Tsy latsak’izany, ho fanehoan’ny vahoaka malagasy ny fitiavan-tanindrazana, ho fiaraha-mitolona hahatongavana amin’ny fahaleovantenam-pirenena marina sy ny fiandrianam-pirenena tena izy.